Kooxda Daacish oo qabsatay magaalada Ramaadi - BBC Somali
Kooxda Daacish oo qabsatay magaalada Ramaadi
Image caption Ciidammada Ciraaq oo dib ugu guranaya dhankaa iyo magaalada Baqdaad
Magaalada Ramaadi ee waddanka Ciraaq ayaa waxa ay gacanta u gashay kooxda isku magacawday Dowladda Islaamiga ah, kaddib markii ay ciidammada dowladda baneeyeen xuramahooda, saraakiisha ayaa sidaasi sheegtay.
Ra’iisul Wasaare Xaydar Alcabaadi ayaa xilli hore ku booriyay ciidammada dowladda in aanay banayn xarumahooda Ramaadi.
Booliska iyo milateriga ayaa sameeyay dib u garasho qaab daran kaddib maalmo uu halkaasi ka socday dagaal xooggan.
Hasayeeshee dowladda Mareykanka ayaa diiday in ay xaqiijiso in magaalada la qabsaday, iyadoo sheegtay in xaaladdu ay aheyd mid "weli lagu loolamayo" ayna tahay xilli hore in la soo saaro "bayaan kama dambeys ah".
Ramaadi waa magaalo madaxda gobolka ugu ballaaran waddanka Ciraaq ee Anbaar, waxa ayna 70 mile (112km) galbeedka ka xigtaa magaalada Badqaaq ee caasimadda dalkaasi.
Bayaan ka soo baxay kooxda Dowladda Islaamiga ah ayaa lagu sheegay in dagaalyahanadeeda ay qabsadeen guud ahaan magaalada.
Waxaa sidoo kale bayaankaasi lagu sheegay in dagaalyahanada kooxdu ay qabsadeen saldhigga Guutada 8-aad, halkaasi oo ay ku qabsadeen taangiyo iyo qalabka laga gano gantaalada oo ay ka carareen ciidammada Ciraaq.